‘कल्पनाबाहिर दर्शकबिनाको क्रिकेट’
ऋग्वेद शर्मा शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७, १३:४९
काठमाडौं- सचिन तेन्दुलकर शुक्रबार ४७ वर्ष लागे। तर अहिले जन्मदिनको उत्सव र खुसी मनाउने बेला छैन। खुसी हुन सक्ने अवस्था नै कहाँ छ र! कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण मुम्बइमा घरभित्र नै रहेका तेन्दुलकरको जन्मदिन पनि सामाजिक सञ्जालसम्म मात्रै रह्यो। कसैसँग पनि भेटघाट बिना।
१५ मार्च यताको दिनचर्यामा तेन्दुलकर र घरभित्रै रहिरहेका अरुबीच खास फरक छैन। शारीरिक दुरी बनाउनुपर्ने यो अवस्थामा बाहिर निस्कन नमिलेकोमा धेरै दुःखी हुन मिल्ने पनि छैन। केही सामान आवश्यक पर्दा किन्नकै लागि बाहेक अरु त बाहिर पनि किन निस्कनु र। तर तेन्दुलकरलाई पुराना साथीहरुसँगको भेटघाट, बेलाबेला खेलिने गल्फ र ब्याडमिन्टन भने खुब याद आइरहेको छ।
अहिले घरभित्रै रहेको समय आफ्ना पुुराना दिनको सम्झना र आउने दिनका योजना बनाउन केही महत्वपूर्ण हुनसक्छ। र सबैभन्दा बढी त क्रिकेट सामान्य जीवनमा फर्किएपछि कस्तो होला भन्ने अनुमान। खेलाडीहरुलाई नै त बाध्यत्मक रुपमा अफ सिजन बिताउन परिरहेको छ। यो सबै सक्किएपछि मैदानमा उस्तै लयका साथ खेल्नुपर्ने चुनौती पनि छँदैछ। त्यसैका लागि लकडाउनमा पनि फिटनेसका लागि मिल्दो सबै काम गरिरहनु नै छ।
तर तेन्दुलकर भने यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किएपछि पनि क्रिकेटमा त्यस्तो ठूलो अन्तर केही नहुने बताउँछन्– ‘मलाई व्यक्तिगत रुपमा के लाग्छ भने योपछि क्रिकेटमा त्यस्तो ठूलो भिन्नता हुने छैन। तर मैले बन्द स्टेडियममा खेल गर्नेबारेको कुरा भने बुझेको छैन।’
‘खेलाडीहरुले सबैभन्दा धेरै उर्जा पाउने नै दर्शकमार्फत हो। यदि भारतले कुनै महत्वपूर्ण खेल जितेको छ भने त्यसको खुसी मनाउन तपाइँको वरिवरि दर्शकहरु हुन् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। तर स्टेडियममा नै कोही छैनन् भने अवस्था कस्तो होला? कसैलाई पनि जितको महत्व कम हुनेछ। त्यस्तोमा मैदानमा नै रहेका खेलाडीहरुले के सोच्लान्?’ तेन्दुलकरले भनेका छन्।
कीर्तिपुर मैदानमा सचिन... सचिन!शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६
तेन्दुलकरका अनुसार कम्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुमा ती जीवन्त दर्शक अपरिहार्य हुन्। भन्छन्– ‘तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, विमबल्डनमा रोजर फेडेरर र राफेल नाडाल कोर्टको बीचमा खेलिरहेका छन् र वरिपरि दर्शक हुने सबै ठाउँ खाली छ। यस्तो खेल हेर्नु त असाध्यै अनौठो हुनेछ। क्रिकेटमा मात्रै होइन हरेक खेलमा दर्शकको त्यो उर्जाको आवश्यकता पर्छ।’
वानखेडे स्टेडियमबाट भावुक बिदाइ भएको सात वर्ष बितिसक्दा तेन्दुलकर स्वयम पनि मैदानमा एक खेलाडी र दर्शकको त्यो उर्जाबाट अहिले त पर नै छन्। उनी छँदा र अहिले क्रिकेटमा नै भएका केही परिवर्तनसँगै टी ट्वान्टी खेलको बढ्दो प्रयोगले दर्शक–खेलाडी बीचको सम्बन्ध अझ नजिक जस्तो भइरहेको छ।
तेन्दुलकर स्वयमलाई भने अहिलेको क्रिकेटबाट पनि आफू उति पर छु जस्तो लाग्दैन। ‘वर्तमान क्रिकेटमा पनि मैले आफूलाई उसैगरी बढाइरहेको छु। अहिलेको परिस्थितिसँग जानकार छु। त्यस्तो केही परिवर्तन भएको छ भन्ने लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘भइरहेका कुराहरुमा भन्दा बढी उस्तो केही गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। किनभने उही तरिकाले नै सबै कुरा अगाडि बढिरहेको छ। बाउन्ड्री लाइन पनि उही ७० यार्ड नै त हो। अवस्था र मैदानअनुसार खेलमा गर्नुपर्ने फरक कुरा त छँदैछ।’
क्रिकेटमा सम्हालिएर लामो समय बस्नुपर्ने गुण र आधुनिक क्रिकेटपछि विकास भएका केही नियममा पनि खेलमा आफ्नोतर्फबाट केही नयाँ कुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने खोजी भने भइरहनु पर्दछ। ‘जस्तो कि बलरले कसरी स्लो बलमा पनि बाउन्सर फाल्न थाले, वाइड योर्कर जस्ता अरु धेरै कुराको खोजी भएको छ। ब्याट्सम्यानको पनि उस्तै नै हो। यस्ता कुरामा आठ दश वर्ष अगाडि भन्दा अहिले केही फरक त भइसकेको छ। खेलको डिमान्डअनुसार यस्ता कुराहरु फेरिँदै पनि जान्छन्।’
सन् १९९९–२००० तिर नै जिम्बावेका एन्डी फ्लावरको रिभर्स स्वीप सट हेर्दा तेन्दुलकरलाई लाग्थ्यो उनी अरु खेलाडीहरुभन्दा दश वर्ष अघि छन्। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा तेन्दुलकरको त्यो सोच सही थियो र फ्लावर नयाँ क्रिकेट सटको आविस्कार जस्ता लागिरहेका छन्।
आफ्नो सन्यासपछि क्रिकेटमा भएका परिवर्तन के हुन् भन्ने विषयमा तेन्दुलकर दुईवटा कुरालाई प्रमुख गरी हेर्छन्। एउटा त अम्पायरको ‘डिसिजन रिभ्यू’ गर्न पाउने सुविधाहरु, अर्को त सन् २०१० ताका आएको पावरप्लेबाहेकका ओभरमा चार फिल्डर रिङबाहिर रहन पाउने नियम र एकदिवसीयमा प्रयोग गर्न पाइने दुईवटा नयाँ बलको सुविधा।
‘डिसिजन रिभ्यू’ को सुविधाले कठीन समयमा खेलाडी आउट नहुँदा दिइने आउट र आउट हुँदा पनि नदिइने आउटका केही समस्याहरु समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ।
दुईवटा नयाँ बलको प्रयोगले त खेलमा आउने भिन्नता अझ ठूलो छ। बलको स्वीङ र स्पीडमा पनि बल नयाँ बल र पुरानो बलले त धेरै फरक पारिनै हाल्दछ। फिल्डरको पोजिसनले पार्ने फरक त अझ विशेष रहन्छ।
तेन्दुलकरका यी सबै कुराहरु किन पनि विशेष छन् भने विश्व क्रिकेटमा उनी जस्ता ब्याट्सम्यान कमै हुन्छन्। तेन्दुलकरका क्रिकेट कीर्तिमानकै मात्र पनि चर्चा गर्ने हो भने धेरै लामा विषयहरु जोडिँदै जान्छन्। अहिलेलाई एउटा विषय सम्झौँ– तेन्दुलकर एकदिवसीय क्रिकेटमा दुई सय रन बनाउने पहिलो ब्याट्सम्यान हुन्, त्यो पनि आजभन्दा दश वर्ष पहिले जतिबेला उनी ३७ वर्षका थिए। त्यसपछि अहिलेसम्म अरु पाँच ब्याट्सम्यानले मात्र दुई सय रनको आँकडा कटाएका छन्।
‘हामी जहिले युवा खेलाडीहरुका बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ त्यहाँ धेरै नामहरु छन्, जस्तो कि पृथ्वी शो, शुभम गिल, सन्जु सामसङ जस्ता खेलाडीहरु भिन्न छन्। जस्तो कि हामी खेल्ने समयमा पनि मभन्दा राहुल द्रविड भिन्न थिए। सौरभ गांगुली थिए। लक्ष्मण थिए। यस्तै अहिलेको खेलाडीमा पनि देखिन्छ नै’ तेन्दुलकरले भने।
अहिले क्रिकेट ठप्प भएको यो समयमा त क्रिकेटका ती पुराना दिनको सम्झना अझ विशेष बनिरहेको छ। यस्तै जीवन्त घटनाहरु सम्झिएर नै क्रिकेटमा अगाडिका दिनको योजना बनाउन नयाँ खेलाडीहरुलाई पनि हौसला मिल्छ। क्रिकेट पक्कै पनि फर्किनेछ। आफ्नै पुरानो शैलीमा नै। त्यसमा परिवर्तनका केही गुणहरु त समयसँगै थपिने नै छन्। त्यससँगै जन्मिने छन् नयाँ स्टार खेलाडीहरु।
(यो सामग्री इएसपिएन क्रिकइन्फोमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो।)
सन्दीपलाई दिल्लीले गर्‍यो रिलिज दिल्ली क्यापिटल्सले सन्दीप लामिछानेलाई रिलिज गरेको छ। विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को टिम दिल्... बुधबार, माघ ७, २०७७